Siyaasadda Asturnaanta — Túlka
Adeegyanda tarjumidda Túlka
Barona Oy | diiwaanka macmiilka iyo suuq-gaynta
Xeerka Xogta Shakhsiga (523/99, oo ay kujiraan wax-ka-beddelo mar dambe)
Barona Oy (“Maamulaha”) waxay qaddarisaa asturnaanta waxaana ka go’an inay ilaaliso asturnaanta macluumaadka dadka iyo wakiilada kooxaha danaynta isticmaalka waxsoosaarka Maamulaha iyo adeegyada (“Adeega”) (Isticmaalayaasha Adeegga iyo wakiilada kooxaha danaynta waxa la isku dhahaa “Xog Lahayaasha”). Diiwaanka macmiilka iyo suuq-gaynta Maamulaha (“Diiwaanka”) waxa kujira diiwaano-hoosaadyada soo socda: Diiwaanka macmiilka ay ku qoran yihiin macluumaadka kusaabsan Isticmaalayaasha Adeegga iyo wakiilada kooxaha danaynta iyo diiwaanka suuq-gaynta ee loogu talogalay suuq-gaynta.
Siyaasaddan asturnaantu waxay sharxaysaa sida Maamuluhu u habeeyo macluumaadka shakhsiga ee Xog Lahayaasha iyo isticmaalayaasha kale ee adeeggiisa iyo sidoo kale macluumaadka kale ee (shakhsi la’aanta). Siyaasaddan asturnaantu waa inay khusaysaa bixinta iyo isticmaalka dhammaan adeegyada iyo waxsoosaarka Maamulaha (oo ay kujiraan websaytka iyo adeegyada Maamuluhu).
Maamuluhu kama masuul ah tallaabooyinka dhinacyada saddexaad (oo ay kujiraan dadka, shirkadaha iyo adeegyadu), waxa ku qoran websaytyada dhinacyada saddexaad, isticmaalka macluumaadka ay siiyeen Xog Lahayaashu ama loogu talogalay wixii waxsoosaar ama adeegyo ay soo bandhigi karaan.
Waxaanu waydiisanaa Xog Lahayaasha inay akhriyaan gabi ahaanba dokumentigan kahor intayna isticmaalin Adeegga.
1. Mabaadii’da Guud ee habaynta macluumaadka
Macluumaadka shakhsiga waxa loo habeeyaa ujeedooyinka isticmaalka, joogtaynta iyo kobcinta Adeegga iyo sidoo kale dirista isgaadhsiinta macmiilka iyo suuq-gaynta. Maamuluhu wuxuu oggol yahay inuu raaco Xeerka Xogta Shakhsiga ee Finnishka iyo qaynuunada kale ee Finnishka ee kusaabsan xaqa qofka ee asturnaanta iyo sidoo kale ku-camalfalka habaynta xogta ee fiican. Maamuluhu wuxuu isticmaalaa qaabab habboon si uu uga hortago una yareeyo halisaha galaangal u yeelashada aan la oggolaan ee macluumaadka shakhsiga, isticmaalka aan habboonayn ee jira iyo wixii khaladaad ah. Dadka habaynaya macluumaadka waxa qabanaya qarsoodinimada la xidhiidha macluumaadka ay heleen.
2. Macluumaadka la ururiyey, meelaha macluumaadka laga helay iyo ujeedada isticmaalka macluumaadka
Maamuluhu wuxuu kaliya ururiyaa macluumaadka shakhsiga ee ku tacaluqa ujeedooyinka lagu sharxay siyaasaddan asturnaanta.
Diiwaanka Maamulaha waxa ugu qoran macluumaadka Xog Lahayaasha qaybaha soo socda:
- macluumaadka magaca iyo cinwaanka;
- ururka iyo shaqada;
- lambarrada taleefanada;
- cinwaanka IP;
- diiwaanka isku-xidhnaanta;
- wicitaanada taleefanada isticmaalayaasha adeegga iyo wakiilada kooxaha danaynta;
- macluumaadka kale ee lagu helay oggolaanshaha Isticmaalaha.
Macluumaadka diiwaanka sida badan waxa laga soo ururiyey Xog Lahayaasha laftooda markay isticmaalayaan Adeegga ama loola xidhiidhay qaab kale. Sidoo kale, macluumaadka shakhsiga waa la ururin karaa lagana cusboonaysiin karaa bixiyayaasha adeegga iyo diiwaanada dadwaynaha.
Maamuluhu sidoo kale wuxuu u ururiyaa macluumaadka qaab farsamo marka Adeegga la isticmaalayo. Macluumaadka noocan ah waxa kujiri kara cinwaanka IP ee Isticmaalaha iyo wakhtiyada codsiyada iyo tallaabooyinka uu qaaday Isticmaaluhu gudaha Adeegga.
Si uu u horumariyo Adeegga, Maamuluhu sidoo kale wuxuu isticmaali karaa qalabka ama xisaabinta softiweer dhinac saddexaad si uu u ururiyo una istimcaalo macluumaadka aan ku xidhiidhsanayn macmiil cayiman.
Cinwaanada IP-ga, nidaamyada hawlgalka, wakhtiga galitaanka, noocyada barawsarka iyo luuqadda iyo cinwaanka websaytka kaasi oo barta laga galay waxa loo ururin karaa si otomaatig ah. Maamuluhu wuxuu u isticmaali karaa macluumaadkan la-socodka iyo falanqaynta kusaabsan isticmaalka adeegyada.
Maamuluhu, hindisihiisa gaarka ah ama codsiga uga yimaadda Xog Lahaha, wuxuu kabi karaan, wax ka beddeli karaa ama masixi karaa macluumaadka shakhsi ah ee aan dhammaystirnayn, khaldan ama muddo-dhaaftay.
3. Shaacinta macluumaadka
Maamuluhu wuxuu u isticmaali karaa bixiyayaasha adeegga dhinaca saddexaad habaynta macluumaadka u kaydan ujeedooyinka xalalka farsamo iyo helista adeegyada, oo uu u isticmaalo isdhexgal farsamo oo gaar ah bixinta galaangal u yeelashada macluumaadka kaydan. Macluumaadka shakhsiga ah waxa si gaar ah loo tusi karaa isticmaalka bixiyayaasha adeeggan iyo dhinacyada saddexaad marka uu oggol yahay qaynuunku ama lagula heshiiyo dhinacyada saddexaad ilaa xadka looga baahan yahay joogtaynta, kobcinta iyo bixinta adeegyada. Maamuluhu wuxuu sidoo kale isticmaali karaa adeegyada dhinaca saddexaad, sida adeegyada ay bixiyeen bixiyayaasha adeegga iimaylka, adeegyada tixraaca daynta, falanqaynta xogta iyo bixiyayaasha macluumaadka shirkadda.
Macluumaadka shakhsiga waxa la tusi karaa dhinacyada saddexaad marka sidan uu dhigayo qaynuunka khuseeyaa ama haddii kale ay rabaan maamulladu, si loo fuliyo shuruudaha khuseeya ee isticmaalka loona baadho wixii jabin ah shuruudaha isticmaalka iyo marka uu dhigayo qaynuunka kusaabsan adeegga, ama si loo fuliyo loona hubiyo in shuruudaha guud ee isticmaalka Adeegga la raacay iyo si loo dammaanad qaado ammaanka Adeegga.
Marka la eego habaynta farsamo ee macluumaadka, macluumaadka qaar waxay si muuqata ugu jiraan kaydadka ka baxsan Maamulaha waxaana lagu habeeyaa isdhexgal farsamo. Wax macluumaad ah looma gudbiyo ama tuso ciddii ka baxsan Midawga Yurub ama Mandaqadda Dhaqaalaha Reer Yurub.
Maamuluhu wuxuu isticmaali karaa bixiyayaasha adeegga dhinaca saddexaad, sida bixiyayaasha adeegga iimaylka, bixiyayaasha adeegga lacag-bixinta iyo falanqeeyayaasha xogta, si loo fuliyo xalalka farsamo. Maamuluhu wuxuu xaq u leeyahay inuu u wareejiyo macluumaadka shakhsiga bixiyayaasha adeegga ee sare ku xusan marka loo baahdo si ay markaa awood ugu yeeshaan inay siiyaan adeegyadooda Maamulaha.
maamuluhu wuxuu shaacin karaa macluumaadka shakhsiga marka la eego wax gadista ganacsigeena ama dib-u-habaynta shirkad la mid ah, tusaale ahaan. Macluumaadka istaatistigis ahaan ama bilaa aqoonsiga ah ee kusaabsan Xog Lahaha waxa la tusi karaa xayeysiiyayaasha, shariigyada ganacsi ama dhinacyo saddexaad, tusaale ahaan.
4. Kuukiska iyo qalabka kale ee la-socod
Maamuluhu wuxuu u isticmaalaa kuukis kumeel gaar ah fulinta farsamo ee Adeegga. Kuukigu waa fayl yar oobarta Internetku ku kaydso aaladda booqduhu uu u isticmaalayo daalacashada barta, taasi barawsarka uu isticmaalay booqduhu siinaysa barta Internetka markasta oo isticmaaluhu booqdo barta markale. Kuukisku waxay u oggolaadaan barta inay, tusaale ahaan, joogtayso kalfadhi (kalfadhiga barta ee qofka isticmaalaha) muddada isticmaalka. Kuukisku ma aha macluumaad shakhsi maadaama qofka isticmaalaha ah aan lagu aqoonsan karin kuukiska dartii. Kuukiska ku kaydan kombiyuutarka isticmaalaha ma oggolaadaan galaangal u yeelashada macluumaadka kujira hard drive-ka kaqaybqaataha.
Maamuluhu wuxuu isticmaali karaa kuukiska iyo aaladaha la mid ah ee raadraaca si uu u aqoonsado ulana socdo isticmaalayaasha booqanaya bartiisa, isticmaalka adeegyada ee isticmaalayaashan iyo falalka isticmaalayaashooda si uu u horumariyo tayada iyo waafajinida adeegyadiisa iyo inuu bixiyo talobixino iyo sidoo kale inuu sii horumariyo adeegyada. Isticmaalayaashu waxay kaga hortagi karaan kuukiska inay sameeyaan isku hagaajin barawsarka ama aaladdooda. Xaaladdan, qaar kamid ah hantida adeegyada webku uma shaqayn karaan sidii loo baahnaa.
Macluumaad kusaabsan isticmaalka adeegga ayaa la ururiyaa iyadoo la adeegsanayo Google Analytics, ama softiweer adeeg falanqayneed oo kale, kaasi oo sidoo kale isticmaala kuukis.
Websaytka Maamulaha waxa kujiri kara xayeysiis ay abuureen dhinacyo saddexaad. Shabakadahan xayeysiis waxay isticmaali karaan kuukiskooda gaarka ah. Adeegyada Maamulaha iyo sidoo kale adeegyada ay bixiyaan dhinacyo saddexaad waxa looga faa’idaystaa ururinta macluumaadka aan shakhsiga ahayn ee kusaabsan isticmaalka adeegyada webka.
5. Xaqa kormeerista iyo mamnuucidda
Xog Lahayaashu waxay xaq u leeyihiin inay kormeeraan macluumaadkoda ku kaydan Diiwaanka. Marka qofi rabo inuu adeegsado isticmaalkiisa kormeerista, waa inuu u diro codsi kormeeris oo saxeexan Maamulahakuna hagaajiyo cinwaanka hoos ku qoran. Qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu codsado in macluumaadka shakhsiga ee kusaabsan isaga in la saxo, la kabo ama laga masaxo Diiwaanka haddii macluumaadku yahay mid khalad ah, daruuri ahayn, dhammaystirnayn ama muddo-dhaafay marka la eego ujeedada habaynta macluumaadka shakhsiga. Maamuluhu sidoo kale wuxuu ku fuliyaa tallaabooyinka sare ku xusan hindisihiisa gaarka ah.
Wakhti ilaa wakhtiga, Maamuluhu waxa uu ku samayn karaan wax-ka-beddello siyaasaddan asturnaanta. Dhammaan wax-ka-beddellada waa la cusboonaysiin websaytka Maamulaha. wax-ka-beddelladu saamayn ku yeelan maayaan xuquuqda Xog Lahayaasha oggolaanshooga la’aantii.
7. Maamulaha iyo qofka ka masuulka ah arrimaha diiwaanka
Xog Lahayaashu waxay la xidhiidhi karaan Maamulaha marka ay doonaan iyagoo isticmaalaya cinwaanka hoose
Aqoonsiga ganacsiga: 27100714
Cinwaanka: Töölönlahdenkatu 3 B, 00100 Helsinki
Taleefanka: +358 20 198 3460 / +358 50 410 8709
Qofka lala xidhiidhayo: Huda Elwan
Adeegyada tarjumidda Túlka | Shuruudaha isticmaalka
Adeegga tarjumaadda Túlka (“Adeegga”) waa adeeg bixiya tarjumaad iyo tarjumaan ay bixiso Barona Group Oy (“Bixiyaha Adeegga”), kaasi oo u saamaxa macaamiisha isticmaalaysa Adeegga (“Macmiilka”) inay ka helaan adeegga tarjumaadda tarjumaanada ka diiwaangashan Adeegga (“Tarjumaanka”). Shuruudahan isticmaalka (“Shuruudaha”) sidoo kale waxay ku qabanayaan Isticmaalayaasha Adeegga kaliya booqashada barta, marka ay khusayso. Dhammaan isticmaalayaasha Adeegga, oo ay kujiraan Macaamiisha iyo Tarjumaanada, halkan wixii ka dambeeya waxa la isku odhan “Isticmaale”. Bixiyaha Adeeggu wuxuu ku fuliyaa oo uu ku bixiyaa Adeegga Shuruudahan isticmaalka. Shuruudahan waxay khuseeyaan Adeegga u dhexeeya Bixiyaha iyo Isticmaalaha markasta oo Adeegga la isticmaalo. Isticmaaluhu wuxuu aqbalaa Shuruudahan markuu isdiiwaangaliyo Adeegga, soo dejisto barnaamij ama softiweer la xidhiidha isticmaalka Adeegga ama haddii kale uu sii wado isticmaalka Adeegga. Shuruudahan sidoo kale waxay khuseeyaan softiweerka la xidhiidha Adeegga, marka ay khusayso.
2. Fulinta Adeegga
Adeegga waxa lagu fuliyaa wicitaan taleefan ama wicitaan fiidyow oo dhexmara Macmiilka iyo Tarjumaanka iyagoo isticmaalaya barnaamijka Túlka.
Tarjumaanku wuxuu ka masuul yahay fulinta shaqada isagoo adeegsanaya khibradda loo baahan yahay, marka uu fulinayo shaqadana, Tarjumaanku wuxuu raacaa tilmaamaha xirfadle ee tarjumaanada oo ay abuurtay Túlka Oy laguna dhigto tabobarka tarjumaanka.
Nidaam elektarooni ah ayaa laga abuuraa Adeegga gudihiisa kaasi oo u dhexeeya Tarjumaanka iyo Macmiilka shaqooyinka oo dhan.
Bixiyaha Adeeggu wuxuu u fuliyaa Adeegga iyo tallaabooyinka ku faahfaahsan Adeegga Macmiilka ee isticmaalka Macmiilka isagoo raacaya jadwalka ay ku heshiiyeen Tarjumaanka iyo Macmiilku.
Haddii aan heshiisku qoraal ahayn, Isticmaaluhu isagaa ka masuul ah helista iyo shaqaynta qalabka, isku-xidhnaanta iyo softiweerka looga baahan yahay isticmaalidda Adeegga.
3. Isticmaalka Adeegga
Isticmaalidda Adeeggu waxay u baahan tahay soo dejisashada barnaamijka moobaylka ee Túlka.
Isticmaaluhu waxa uu kaliya u isticmaali karaa Adeegga sida ay dhigayaan Shuruuduhu. Adeegyada waxa loogu talogalay isticmaalka shakhsiga ah ee Isticmaalaha. Isticmaaluhu xaq uma laha inuu abuuro nooc cusub ama adeeg cusub oo kusalaysan Adeegga ama inuu u isticmaalo Adeegga faa’idadiisa ganacsiyeed.
Bixinta Adeeggu ma abuurayso xidhiidh shaqaalayneed oo ka dhexeeya cid kamid ah dhinacyada.
Isticmaaluhu xaq uma laha inuu wareejiyo xaqa isticmaalka Adeega (oo ay kujiraan aqoonsiyada macmiilka, baasweedhada ama wixii la mid ah ee la xidhiidha Adeegga) ama heshiis kusaabsan Adeegga oo uu la galo dhinac saddexeed isagoo ka haysan oggolaansho qoraal ah Bixiyaha Adeegga.
Adeeggu wuxuu kusalaysan yahay kaqaybqaadasho iskaa ah. Adeegga waxa lagu bixiyaa “sida uu yahay”, Bixiyaha Adeegguna ama Tarjumaanku ma bixin karo wax kafaalo ah ama dammaanad ah oo la xidhiidh Adeegga.
Isticmaaluhu wuxuu oggolaaday inaanu sii gudbin Adeegga ama qayb kamid ah (adeegg). Isticmaalaha ama wakiilkiisu, haddii Isticmaaluhu yahay qof yar, ayaa ka masuul ah wixii tallaabooyin dhib u gaysta Bixiyaha Adeegga ama cid saddexaad oo ku yimaadda si xun u adeegsiga Adeega ama qayb kamid ah. Isticmaaluhu wuxuu oggolaaday inuu siiyo Bixiyaha Adeegga wixii magdhaw iyo waxyeelooyin kaga yimaadda six xun u adeegsiga Adeegga iyo sidoo kale magdhawga ku yimaadda sheegashooyinka dhinacyo saddexaad.
4. Khadmadda isticmaalka Adeegga
Fulinta Adeeggu waa iskaa, Macmiilkana loogama baahan inuu bixiyo lacag, Tarjumaankuna xaq uma laha inuu lacag ku helo bixinta adeegga tarjumaanka ama adeegyada kale sida heshiiskan dhigayo. Bixiyaha Adeeggu wuxuu xaq u leeyahay, mustaqbalka, inuu u beddelo Adeegga mid lacag la qaado.
5. Joogtaynta Adeegga
Bixiyaha Adeegga ayaa maamula Adeegga oo siiyana magaca lagu isticmaalayo iyo baasweedhada Isticmaalaha laga rabo isticmaalka Adeegga.
Bixiyaha Adeeggu wuxuu aad ugu dadaali inuu si joogto ah ugu bixiyo Adeegga bilaa kala-go’. Bixiyaha Adeeggu, hase yeeshee, ma aha mid ka masuul ah habsocodka bilaa kala-go' ah ee Adeeggu inuu bilaa khaladaad noqdo ama arrimo farsamo dartood, kala-go'yada ay keeneenaan joogtaynta ama rakibista ama beddelista ama dhuminta macluumaad kujira Adeegga ama haddii kale, dhibaatooyinka, arbushyada ama kala-go’yada isgaadhsiinta xogta ay keenaan dhinacyo saddexaad, ilaa haddii kale uu go’aamiyey sharci waajib ah ama shuruudo adeegga ku gaar ah.
Haddii ay suurogal tahay, kala-go'yadan hore ayaa loo sii sheegaa.
Bixiyaha Adeeggu si joogto ah ayuu u horumariyaa Adeegga wuxuuna xaq u leeyahay inuu u beddelo Adeegga iyo wixii kujira qayb caadi ah oo kamid ah hawlihiisa marka iyo goorta ay ku habboonaato. Bixiyaha Adeeggu wuxuu xaq u leeyahay, bilaa ogaysiis gaarkiisa ah, inuu si kumeel gaadh ah ama abadi ah u joojiyo Adeegga ama qayb kamid ah.
6. Xuquuqda hantida maskaxeed
Ma jiro wax xuquuqda hantida maskaxeed ah oo uu wareejinayo heshiiskani. Dhammaan xuquuqda Adeegga waxa iska leh Bixiyaha Adeegga.
Adeegyada waxa kaliya loo isticmaali karaa ujeedada lagu heshiiyey. Isticmaaluhu xaq uma laha, xiitaa qayb ahaan, inuu sawirto, ama haddii kale badiyo, kaydiyo, wareejiyo, cid kale u gudbiyo, qaybiyo, daabaco, shayo kale ku qaldo ama ku soo dejisto kombiyuutarkiisa si uun wax kasta uu yahay shaygu mid ula xidhiidha Adeegga haddii aanu jirin oggolaansho hore, cayiman oo qoran uu bixiyey Bixiyaha Adeeggu. Tarjumaanku wuxuu leeyahay xuquuqda daabacaad tarjumaaddiisa, laakiin xaqiisa isticmaalka tarjumaadda waxa xaddidaya baahida qarsoodinimada. Tarjumaadda waxa kaliya lagu duubi karaan oggolaanshaha cayiman ee Tarjumaanka, codka duubanna waxa kaliya loo isticmaali karaa sida gaar ahaan loogu heshiiyo qoraal.
Isticmaalka calaamadaha ganacsi iyo sidoo kale aqoonsiyada shirkadda iyo ganacsiga la xidhiidha Adeegga waa mamnuuc haddii aanu jirin oggolaansho hore, cayiman oo qoran uu bixiyey Bixiyaha Adeeggu.
Ku dhaqaaqa jabinta Shuruudahan waxay horseedi karaan qaadista masuuliyadda waxyeelada iyo/ama masuuliyadda dambiga. Bixiyaha Adeeggu waxa dhici karta inuu ka saaro Isticmaalaha Adeegga haddii Isticmaaluhu ku kaco inuu jabiyo Shuruudaha isticmaalka.
7. Adeegyada dhinaca saddexaad
Haddii ay dhacdo in adeegyada cid saddexaad lagu siiyo iyadoo la adeegsnayo Adeegga, shuruudaha adeegga ee dhinaca saddexaad ee laga hadlayo waa inay khuseeyaan adeegyadan. Bixiyaha Adeeggu kama masuul aha galaangal u yeelashada barahan iyo/ama adeegyadan, isticmaalka ama shaqaynta ama waxa kujira, xayeysiiska, waxsoosaarka ama shayada kale ee laga dhigo qaar laga heli karo websaytkan iyo/ama adeegyadan.
8. Asturnaanta iyo ammaanka xogta
Isticmaaluhu waa inuu siiyo Bixiyaha Adeegga macluumaadka daruuriga u ah isticmaalka Adeegga. Isticmaalaha ayaa ka masuul ah saxsanaanta macluumaadka uu bixiyo, waana inuu ogaysiiyo Bixiyaha Adeegga wixii isbeddel ku yimaadda macluumaadka. Isticmaalaha ayaa ka masuul ah ilaalinta magacyada iyo baasweedhada isticmaalaha iyo inaanu tusin dhinacyo saddexaad. Isticmaalaha ayaa ka masuul ah dhammaan ficillada laga fuliyey Adeegga dhexdiisa iyadoo la isticmaalayo magaca iyo baasweedhka isticmaalaha.
Adeegga waxa la fuliyey iyadoo la raacayo Xeerka Xogta Shakhsiga. Isticmaalaha ayaa ka masuul ah hubinta in qalabka, isku-xidhnaanta ama softiweerka uu maareeyo Isticmaaluhu ayna ku keenin wax qas ah, arbush ah ama waxyeelo ah Bixiyaha Adeegga, Isticmaalayaasha kale ama dhinaco saddexaad.
Bayaanka asturnaanta Bixiyaha Adeegga waxa laga heli karaa [www.tulka.com]
9. Jumladda tartan la’aanta
Tarjumaanku wuxuu oggolaaday inaanu abuurin shirkad ama adeeg si toos ah ula tartamaysa Bixiyaha Adeegga, iyo inaanu u matalin si toos ah ama si dadban saamiile ama ama shariig ahaan ganacsi la tartamaya iyo inuu ama haddii kale ka joogo kaqaybqaadashada hawl la tartamaysa, si toos ah ama iyagoo adeegsanaya shirkad ay leeyihiin oo ay maareeyaan iyagu, halka Tarjumaanku ka diiwaangashan yahya Isticmaale Adeegga.
Si ay wax u caddaadaan, waa in la xusaa in jumladdan tartan la’aantu AYNA xaddidayn suurogalnimada Tarjumaanku inuu ku shaqeeyo tarjumaan ahaan ama fuliyo shaqooyin tarjumid oo ka baaxad wayn waxa lagu sheegay xagga sare.
Tarjumaanka waxa qabanaya qarsoodinimo dhammaystiran marka la eego macluumaadka uu helay Adeegyada dartood, umana isticmaali karo macluumaadkan danihiisa gaarka ah ama ma tusi karo dhinacyo saddexaad.
Tarjumaanku waa fahamsan yahya in marka uu fulinayo Adeegga ama shaqada tarjumid ee kale, inuu heli karo macluumaad kusaabsan heerka dhaqaale, caafimaadka ama xaaladaha shakhsi ee Macmiil, Bixiyaha Adeegga ama dhinac saddexaad, ama macluumaad kusaabsan ganacsi ama siro xirfadle ama macluumaad kale oo uu u fahamsan yahay inay qarsoodi yihiin (“Macluumaad Qarsoodi”) ah. Tarjumaanku wuxuu oggolaaday inaanu tusin Macluumaad Qarsoodi ah dhinacyo saddexaad ilaa tan uu oggolaado dhinaca danihiisa dartii loo soo rogay qarsoodinimadu ama ilaa haddii kale uu sharcigu dhigayo. Tarjumaanku sidoo kale wuxuu oggolaaday inaanu tusin Macluumaad Qarsoodi ah oo uu helay dhinacyo saddexaad, aanu u isticmaalin Macluumaad Qarsoodiga ah ujeedooyin aan ahayn fulinta hawlo waafaqsan shaqada ay u heleen iyo inuu, dhammaadka shaqada iyo marka la codsado, uga tago Macmiilka dhammaan shayada Maciilka, iyadoon la eegin qaabka duleed ama muuqaalka shayadan. Haddii Macluumaadka Qarsoodiga ah hore loogu sii diro Tarjumaanka, Tarjumaanku waa inuu burburiyo shayda uu Macmiilku u diray haddii Macmiilku tan kaga doono qoraal.
Waxa sare ma khuseeyaan isticmaalka Macluumaadka Qarsoodiga ah ee u baxay qaab sharciga waafaqsan ama kuwaasi oo ay tahay in lagu shaaciyo xeer, digreeto ama qaynuun kale oo maamullada ah ama xukun maxkamadeed.
Baahida qarsoodinimada ayaa soo noolaysa joojinta heshiiskan
8. Xaddidnaanta masuuliyadda
Bixinta Adeeggu waxay kusalaysan tahay kaqaybqaadashada iskaaga ah ee Tarjumaanka, iyo Bixiyaha Adeegga ama Tarjumaanku waajib kama saarna inuu qabto Adeegga, Bixiyaha Adeegguna ama Tarjumaanku kama masuul ah sinaba xagga Macmiilka marka la eego qabashada ama qabasho la’aanta Adeegga.
Si wax u caddaadaan darteed, Bixiyaha Adeegga ama Tarjumaanku kama masuul aha wixii waxyeelo toos ah ama dadban ee Macmiilka, Isicmaale kale ama dhinac saddexaad soo gaadha.
11. Qaynuunka iyo awoodda sharci ee khuseeya
Qaynuunka Finnishku waa inuu khuseeyaa Shuruudahan iyada oo ay ka reebban yihiin qaynuunada kusaabsan khilaafka sharciga.
Wixii muran ah waa in ugu horraynba lagu xalliyaa qaab wada-hadal oo dhexmara dhinacyada. Haddii tan lagu guulaysan waayo, murranada waa in lagu xalliyaa maxkamadda degmada ee Helsinki.
12. Wax-ka-beddellada Shuruudaha isticmaalka
Shuruudahan waxa laga heli karaa [www.tulka.com]. Bixiyaha Adeeggu wuxuu xaq u leeyahay inuu wax-ka-beddelo Shuruudahan. Bixiyaha Adeeggu wuxuu ogaysiin Isticmaalaha wixii isbeddel kusaabsan Adeegga isagoo wax-ka-beddel ku samaynaya Shuruudahan [www.tulka.com]. Wixii isbeddello waawayn ah waxa lagu ogaysiiyaa iimayl loo diro iimaylka Isticmaaluhu dhiibay. Isticmaaluhu wuxuu ku oggolaanayaa wax-ka-beddelka shuruudaha Adeegga inuu sii wado isticmaalka Adeega marka wax laga beddelay shuruudaha.
Barona Technologies Oy / Túlka Oy
Cinwaanka: Töölönlahdenkatu 3 B, 00100 Helsinki, Finland
Qofka lala Xidhiidhayo: Huda Elwan,